တမြို့လုံး အသားမစားတဲ့ မြို့ လေး နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးသော“သာမည ဆရာတော်”ဘုရားကြီး – Zartiman
တမြို့လုံး အသားမစားတဲ့ မြို့ လေး နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးကြီးသော“သာမည ဆရာတော်”ဘုရားကြီး
သာမညဆရာေ တာ် ဘုရားကြီးသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ဝါဆုကျောင်း၊ သာမညတောင်ပေါ်ကျောင်းတို့တွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်လျက်ရှိကြသော ရဟန်း၊ သာမဏေ၊ သီလရှင် ယောဂီ ၅၀၀ ခန့်တို့အား ပရိ ယတ္တိစာပေများပို့ချခြင်း၊ ဝိပဿနာရှုမှတ်ကျင့်ကြံ နည်းများအား ဟောပြောပို့ချခြင်း၊ အရ ညကင် ဓူတင်အကျင့်ကို အစဉ်ကျင့်သုံးတော်မူခြင်း၊ သာမညတောင်ပေါ်သို့ နေ့စဉ်ရောက်ရှိလာ သော ယောဂီသူတော်စဉ်များ၊ ဘုရားဖူးဧည့်ပရိသတ်များအား တရားဓမ္မဟောကြားခြင်းအမှုအား ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူချိန်အထိ ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့သည်။
ပြောက်ကျား ဝတ်စုံတွေနဲ့ ဗမာစကားလည်း ပြောတယ်။ ကရင်စကားလည်း ပြောတယ်။ ပအိုးဝ်စကားလည်း ပြောတယ်။ ဘယ်သူတွေဆိုတာကို ပြန်ပြောပြရင် ကျည်ဆန်တတောင့်ပဲ”ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သဖြင့် သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို စောင့်ရှောက်သည့် ဥပါသကာသည် ဆရာတော်ကြီး၏ရုပ်လောင်းကို မည်သူ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက ယူဆောင်သွားသည်ဆိုခြင်းကို ထုတ်ဖော်မပြောချေ။
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အကြီးမားဆုံး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းမဖြစ်မီ တလအလို ၂၀၀၈ ခု ဧပြီ ၂ ရက် ညသန်း ခေါင်ယံအချိန်တွင် သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်အား ဘာသာစကားသုံးမျိုး ပြောဆိုသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က အထက်ပါ အတိုင်းခြိမ်းခြောက်၍ အဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု လက်ရှိ သာမညတောင်တွင် သီတင်းသုံးနေသည့် ဦးပဉ္စင်းတပါးက မိန့်သည်။
သာမည ဆရာတော်ဘုရားကြီး သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က သာမညတောင်တွင် လာရောက်သည့် လူထုပရိသတ်ထောင်ပေါင်းများစွာတို့အား သက်သတ်လွတ် ထမင်းဟင်းများဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံရာမှ ဘားအံ-မြဝတီ လမ်းမှ သာမညတောင်သို့သွားသည့် လမ်းမုခ်ပေါက်မှစ၍ သာမညတောင်ပေါ်အထိ သွားရာ လမ်းတလျှောက်ရှိ လူနေအိမ်များသည် သာမည ဆရာတော်ရှိစဉ်မှစ၍ ယခုအထိ သက်သတ်လွတ် စားသုံးကြသည်ဟုလည်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ယင်းမြို့လေး သည် သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အရိပ်အာဝါသကို မှီခိုရင်းဖွံ့ဖြိုးလာသည့် မြို့လေးဖြစ်သည်။ ”အိမ်ခြေတသောင်းကျော်ရှိတယ်။ ဘယ်သူမှ နာမည်မပေးဘူး။ အကုန်လုံးက သာမညမြို့လေးလို့ ခေါ်ကြတာ”ဟု သာမညတောင်ခြေဈေးအတွင်းရှိ သစ်သီးရောင်းသူတဦးက ပြောသည်။ ၁၉၈၀ ကျော်ကာလ၌ သာမညဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ဂုဏ်သတင်း တစတစ ကျော်ကြား လာစဉ်က ထိုတောင်ခြေနေရာသည် မြေရိုင်းလမ်းနှင့် တောနက်ကြီးတခုသာရှိသေး သည်ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ သာမညသို့ လာရောက်ဘုရားဖူးသည့် ဦးကျော်စွာမိုးက ပြောသည်။
“သာ မညတောင်တွင် ပဉ္စင်းခံခဲ့သူ ဦးကျော်စွာမိုး”
ဦးကျော်စွာမိုးသည် ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကျော် ဝန်းကျင်ခန့်တွင် သာမညဆရာတော် ဘုရားကြီးထံ သွား ရောက်၍ ဦးပဉ္စင်းခံကာ ရဟန်းဘဝဖြင့် ကိုးလကြာ သီတင်းသုံးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ”အဲဒီတုန်းက မြေသားလမ်းတွေဖြစ်တော့ သာမညမှာရှိတဲ့ ရဟန်းတွေ၊ ကိုရင်တွေရဲ့လုပ်အားနဲ့ မြေသားလမ်းဖြစ် အောင်ဖောက်ရတာ၊ အခုလို အိမ်တွေ ဈေးတွေဘာမှမရှိဘူး။ ရဟန်းဘဝက လူဝတ်လဲတော့မယ်လို့ သာမညဆရာတော်ကို သွားလျှောက်တော့ တောင်ခြေမှာ မြေကွက်တကွက် ငွေကျပ်ဆယ်ဂဏန်း လောက်ပဲရှိတာ ဝယ်နေလို့တောင် ဆရာတော်က မိန့်ခဲ့သေးတယ်။
အခု ဆိုမြို့လိုဖြစ်သွား တယ်ဆိုတော့ ဒီမြို့ရဲ့သက်တမ်းက နှစ်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်ပဲ ရှိဦးမယ်”ဟု သူ၏အတွေ့အကြုံအား ပြောပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ရဟန်းဘဝမှ လူဝတ်လဲပြီး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့် အကြောင်းအား ဆရာတော်ကိုလျှောက်တင်လို သည်ဟုဆိုသည်။ ”အဲဒီအချိန် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဘေးမှာ လူထုပရိသတ်ကလည်း အများကြီးဆိုတော့ ပရိသတ်ရဲ့ နောက်နားကနေ လက်အုပ်လေး ချီပြီး လျှောက်ထားလိုက်တယ်။ တပည့်တော် ဂျပန်ကို သွားရတော့မှာဖြစ်လို့ သက်သတ်လွတ်တော့ စားဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးဘုရား။
ဟို မှာ အဆင်ပြေပါ့မလားလို့ စိတ်ထဲကပဲ လျှောက်တာကို ဆရာတော်က လူထုပရိသတ်ကို တရားဟောရင်းကနေ သူများနိုင်ငံမှာလည်း သက်သတ်လွတ်စားရင်ဖြစ်တာပါပဲ။ အာလူးကက်သလိပ်ကြော်တို့၊ ကြက်သွန်ကြော်တို့ရှိတာပဲ။ ဘယ်မှာနေနေကောင်းအောင် နေရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တရားထဲထည့်ဟောတာ ကြက်သီးတောင်ထတယ်။ ဒါပေမဲ့ သြော် . . . တိုက်ဆိုင်တာပဲ ဖြစ်မှာပါလို့ပဲ တွေးလိုက်တာ ဂျပန်ကို တကယ်ရောက်တော့ ဆရာတော်မိန့် တဲ့အတိုင်း အာလူးကတ်သလိပ်ကြော်နဲ့ ကြက်သွန်ကြော် တကယ်ရှိလို့ အံ့သြသွားတာ”ဟု သူ၏ အတွေ့အကြုံအားပြောပြသည်။
သူ သာမည၌ ရဟန်းဝတ်ခါစတွင်လည်း မည်ကဲ့သို့ နေထိုင်ရမည့်အကြောင်းအား ဆရာတော်ကို လျှောက်ထားရာ ဆရာတော်မှ ”ဒီတောင်တဝိုက်မှာ ရဟန်း သံဃာတွေ အများကြီးလိုက်ကြည့်ပေါ့။ အဲဒီအထဲက ကောင်းတာကိုယူပေါ့။ မကောင်းတာ မယူနဲ့”ဟုသာ မိန့်ကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ လက်ရှိအချိန် ၎င်းအနေနှင့်သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး မရှိတော့သော်လည်း အလုပ်အကိုင်သစ် တိုးချဲ့မှုပြုလုပ်တိုင်း သာမညတောင်သို့ လာရောက် အောက်မြေနင်း၍သာ အလုပ်အကိုင်သစ်ကို တိုးချဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်း ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကျော် သာမညဆရာတော် ဘုရားကြီးဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမှုကြောင့် ပြည်တွင်း ခရီးသွားကုမ္ပဏီများမှ သာမည ခရီးစဉ်အဖြစ် အထင် ကရ ထည့်သွင်းလာခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနယ် နယ်အရပ်ရပ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းတို့သည်လည်း သာမညတောင်သို့ မဖြစ်မနေသွားရောက်ကာ ဆရာတော်ကို ဖူးမြော်သဖြင့် သာမညတောင်သည် ရာသီမရွေး အထူးပင်စည်ကားခဲ့သောနေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီးအား လာရောက်ကြည် ညိုဖူးမြော်သူများထဲတွင် မြန်မာပြည်သူများ အပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား အများအပြားပါလာရောက် ဖူးမြော်ကြသည်အထိ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှလည်း သာမညသို့ လာရောက် သူ လူထုမင်းပရိသတ်အား သက်သတ်လွတ်ထမင်း ဟင်းဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးရာတရက်လျှင် ဆန်တင်း ပေါင်းရာနှင့်ချီ၍ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ကို တောင်းဖြင့် လာလှူသူ”
ဆရာေ တ်ာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် အိုးအိမ်မဲ့များအား ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ လမ်းများပြုပြင်ခြင်းတို့ကို အထူးအရေးပေးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။ ”လမ်းခင်းတဲ့ ကတ္တရာတွေ ကုန်သွားပြီဆိုပြီး ဆရာတော်ဆီကို သွားလျှောက်တော့ ဆရာတော်က ဖုန်းဆက်တယ်၊ မနက်လည်းရောက်ရော ရှမ်းအမျိုးသမီးတယောက်က သိန်းငါးထောင်တောင်းတွေနဲ့ ထည့်ပြီးလာလှူတယ်။ စဉ်းစားလို့မရတာက အဲဒီအချိန် ဘဏ်စနစ်တွေလည်း မကောင်းဘူး၊ သာမန်အမျိုး သမီးတယောက်ပုံစံက သိန်းငါးထောင်ကို တညတည်းနဲ့ လာလှူတာဆိုတော့ တော်တော်အံ့သြသွားတာ ခု ခေတ် သူဌေးတောင် ငွေသိန်းငါးထောင်လိုရင်ချက် ချင်းအဆင်သင့်ရှိပါ့မလား။ ဘဏ်ထုတ်ရမှာနဲ့ ဘာနဲ့လေ။ အဲဒီငွေ လာလှူလည်းပြီးရော ထိုင်းဘက်ကို ကတ္တရာပုံးတွေ လှမ်းမှာပြီး လမ်းတွေခင်းတာ” ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
ဆရာေ တာ်၏ သီလဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်၊ ခမာ၊ ဇာဂရိယ စသော ဂုဏ်များနှင့် သာသနာရေး အားပေးဆောင်ရွက်တော်မူခြင်းများကို လေးစားလျက်နိုင်ငံတော်အစိုးရက ၁၉၉၁၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ တွင် အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ သာသနာတော်အကျိုးအား သယ်ပိုးထမ်းဆောင်တော် မူရင်း သက်တော် ၉၃ နှစ်၊ သိက္ခာတော် ၇၃ ဝါအရ ၁၃၆၅ ခု၊ နတ်တော်လဆန်း ၆ ရက်၊ ၂၉-၁၁-၂၀၀၃ စနေနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။
ဆရာေ တ်ာသည် ၂၉-၁၁-၂၀၀၃ တွင် ဘဝ နတ်ထံပျံလွန်တော်မူခဲ့သဖြင့် လက်ရှိ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ တွင် ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်မှာ ၁၃ နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ၁၃ နှစ် ကြာမြင့်ခဲ့သော်လည်း ဆရာတော်ဘုရား ပျံလွန်တော်မူပြီးစအချိန် ဆရာတော်၏ရုပ်ကလာပ်တော် ရှိစဉ်က သာမညတောင်သို့ ဘုရားဖူးလာရောက်သူ အများအပြားရှိသေးသည်ဟု လက်ရှိ သီတင်းသုံးနေသော ဦးပဉ္စင်းတပါးက မိန့်သည်။ ”ဆရာတော်ရှိတုန်းက ရဟန်း၊ သာမဏေ၊ သီလရှင်၊ ယောဂီ ငါးရာ လောက် သီတင်းသုံးကြပေမယ့် အခုဆို စုစုပေါင်းအပါး သုံးဆယ်လောက်ပဲရှိတယ်။ အခြားပြောင်းပြီး သီတင်းသုံးသူရှိသလို လူထွက်တဲ့ သူတွေလည်း ထွက်ကုန်ကြပြီ။ ကိုရင်ဆိုရင် အခုတပါးပဲရှိတော့တယ်” ဟု မိန့် သည်။
သာမညဆရာတော်ဘုရားကြီး ပျံတော်မူပြီး ရုပ်ကလာပ်တော်ရှိစဉ်က မြန်မာပြည်ဘုရားဖူးခရီးစဉ်များ တွင် သာမညဘုရားဖူးခရီးစဉ်အဖြစ် ရှိနေသေးသော်လည်း ရုပ်ကလာပ်တော် ခိုးယူခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားဖူးခရီးစဉ်အဖြစ် တဖြည်းဖြည်းကွယ်ပျောက်လာခဲ့သည့်အပြင် ရဟန်း၊ သာမဏေ၊ သီလရှင် ယောဂီများလည်း လျော့ပါးလာခဲ့သည်ဟု မိန့်သည်။ ဆရာ တော်ဘုရားကြီးရှိစဉ်က လူထုဧည့်ပရိသတ်အတွက် သက်သတ်လွတ်ထမင်းဟင်းကျွေးရာ ဆန်တင်းပေါင်း တရာကျော်နေ့စဉ်ချက်ပြုတ်ခဲ့ရပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဆန် ၃ တင်းခန့်သာ ချက်ပြုတ်ရပြီး ဘုရားဖူးလာရောက်သူများအား သက်သတ်လွတ်ထမင်းဟင်း ကျွေး မွေးနေဆဲပဲဖြစ်သည်ဟု မိန့်သည်။
သာမည ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူပြီး၁၃ နှစ် ပြည့်ချိန်တွင် သာမညတောင်သို့ ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများ မရှိတော့သကဲ့သို့ သာမညတောင်တွင် သီတင်းသုံးသည့် ရဟန်းသာမဏေ သီလရှင်ယောဂီများလည်း နည်းပါးသွားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဆရာတော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်နှင့် သာမညတောင်၏ အရိပ်အာဝါသကြောင့် သာမညမြို့ကလေးသည် နှစ် ၃၀ ခန့်အတွင်း အခြေချနေထိုင်သူများဖြင့် စည်ကားနေသည်ကို တွေ့မြင်နေရသည်။
တမွို့လုံး အသားမစားတဲ့ မွို့ လေး နှငျ့ ဘုနျးတနျခိုးကွီးသော“သာမည ဆရာတျော”ဘုရားကွီး
သာမညဆရာေ တျာ ဘုရားကွီးသညျ ကရငျပွညျနယျ၊ ဘားအံမွို့နယျ၊ ဝါဆုကြောငျး၊ သာမညတောငျပျေါကြောငျးတို့တှငျ သီတငျးသုံး နထေိုငျလကျြရှိကွသော ရဟနျး၊ သာမဏေ၊ သီလရှငျ ယောဂီ ၅၀၀ ခနျ့တို့အား ပရိ ယတ်တိစာပမြေားပို့ခခြွငျး၊ ဝိပဿနာရှုမှတျကငျြ့ကွံ နညျးမြားအား ဟောပွောပို့ခခြွငျး၊ အရ ညကငျ ဓူတငျအကငျြ့ကို အစဉျကငျြ့သုံးတျောမူခွငျး၊ သာမညတောငျပျေါသို့ နစေ့ဉျရောကျရှိလာ သော ယောဂီသူတျောစဉျမြား၊ ဘုရားဖူးဧညျ့ပရိသတျမြားအား တရားဓမ်မဟောကွားခွငျးအမှုအား ဘဝနတျထံပြံလှနျတျောမူခြိနျအထိ ဆောငျရှကျတျောမူခဲ့သညျ။
ပွောကျကြား ဝတျစုံတှနေဲ့ ဗမာစကားလညျး ပွောတယျ။ ကရငျစကားလညျး ပွောတယျ။ ပအိုးဝျစကားလညျး ပွောတယျ။ ဘယျသူတှဆေိုတာကို ပွနျပွောပွရငျ ကညျြဆနျတတောငျ့ပဲ”ဟု ခွိမျးခွောကျခဲ့သဖွငျ့ သာမညဆရာတျောဘုရားကွီး၏ ရုပျကလာပျတျောကို စောငျ့ရှောကျသညျ့ ဥပါသကာသညျ ဆရာတျောကွီး၏ရုပျလောငျးကို မညျသူ မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးက ယူဆောငျသှားသညျဆိုခွငျးကို ထုတျဖျောမပွောခြေ။
မွနျမာနိုငျငံ ၏ အကွီးမားဆုံး သဘာဝဘေးအန်တရာယျဖွဈခဲ့သညျ့ နာဂဈမုနျတိုငျးမဖွဈမီ တလအလို ၂၀၀၈ ခု ဧပွီ ၂ ရကျ ညသနျး ခေါငျယံအခြိနျတှငျ သာမညဆရာတျောဘုရားကွီး၏ ရုပျကလာပျအား ဘာသာစကားသုံးမြိုး ပွောဆိုသညျ့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့က အထကျပါ အတိုငျးခွိမျးခွောကျ၍ အဓမ်မယူဆောငျသှားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု လကျရှိ သာမညတောငျတှငျ သီတငျးသုံးနသေညျ့ ဦးပဉ်စငျးတပါးက မိနျ့သညျ။
သာမည ဆရာတျောဘုရားကွီး သကျတျောထငျရှားရှိစဉျက သာမညတောငျတှငျ လာရောကျသညျ့ လူထုပရိသတျထောငျပေါငျးမြားစှာတို့အား သကျသတျလှတျ ထမငျးဟငျးမြားဖွငျ့ ကြှေးမှေးဧညျ့ခံရာမှ ဘားအံ-မွဝတီ လမျးမှ သာမညတောငျသို့သှားသညျ့ လမျးမုချပေါကျမှစ၍ သာမညတောငျပျေါအထိ သှားရာ လမျးတလြှောကျရှိ လူနအေိမျမြားသညျ သာမည ဆရာတျောရှိစဉျမှစ၍ ယခုအထိ သကျသတျလှတျ စားသုံးကွသညျဟုလညျး ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။
ယငျးမွို့လေး သညျ သာမညဆရာတျောဘုရားကွီး၏ အရိပျအာဝါသကို မှီခိုရငျးဖှံ့ဖွိုးလာသညျ့ မွို့လေးဖွဈသညျ။ ”အိမျခွတေသောငျးကြျောရှိတယျ။ ဘယျသူမှ နာမညျမပေးဘူး။ အကုနျလုံးက သာမညမွို့လေးလို့ ချေါကွတာ”ဟု သာမညတောငျခွစြေေးအတှငျးရှိ သဈသီးရောငျးသူတဦးက ပွောသညျ။ ၁၉၈၀ ကြျောကာလ၌ သာမညဆရာတျော ဘုရားကွီး၏ ဂုဏျသတငျး တစတစ ကြျောကွား လာစဉျက ထိုတောငျခွနေရောသညျ မွရေိုငျးလမျးနှငျ့ တောနကျကွီးတခုသာရှိသေး သညျဟု ရနျကုနျမွို့မှ သာမညသို့ လာရောကျဘုရားဖူးသညျ့ ဦးကြျောစှာမိုးက ပွောသညျ။
“သာ မညတောငျတှငျ ပဉ်စငျးခံခဲ့သူ ဦးကြျောစှာမိုး”
ဦးကြျောစှာမိုးသညျ ၁၉၈၀ ခုနှဈကြျော ဝနျးကငျြခနျ့တှငျ သာမညဆရာတျော ဘုရားကွီးထံ သှား ရောကျ၍ ဦးပဉ်စငျးခံကာ ရဟနျးဘဝဖွငျ့ ကိုးလကွာ သီတငျးသုံးခဲ့သညျဟုဆိုသညျ။ ”အဲဒီတုနျးက မွသေားလမျးတှဖွေဈတော့ သာမညမှာရှိတဲ့ ရဟနျးတှေ၊ ကိုရငျတှရေဲ့လုပျအားနဲ့ မွသေားလမျးဖွဈ အောငျဖောကျရတာ၊ အခုလို အိမျတှေ စြေးတှဘောမှမရှိဘူး။ ရဟနျးဘဝက လူဝတျလဲတော့မယျလို့ သာမညဆရာတျောကို သှားလြှောကျတော့ တောငျခွမှော မွကှေကျတကှကျ ငှကေပျြဆယျဂဏနျး လောကျပဲရှိတာ ဝယျနလေို့တောငျ ဆရာတျောက မိနျ့ခဲ့သေးတယျ။
အခု ဆိုမွို့လိုဖွဈသှား တယျဆိုတော့ ဒီမွို့ရဲ့သကျတမျးက နှဈသုံးဆယျဝနျးကငျြပဲ ရှိဦးမယျ”ဟု သူ၏အတှအေ့ကွုံအား ပွောပွခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးသညျ ရဟနျးဘဝမှ လူဝတျလဲပွီး ဂပြနျနိုငျငံသို့ အလုပျသှားရောကျလုပျကိုငျမညျ့ အကွောငျးအား ဆရာတျောကိုလြှောကျတငျလို သညျဟုဆိုသညျ။ ”အဲဒီအခြိနျ ဆရာတျောကွီးရဲ့ ဘေးမှာ လူထုပရိသတျကလညျး အမြားကွီးဆိုတော့ ပရိသတျရဲ့ နောကျနားကနေ လကျအုပျလေး ခြီပွီး လြှောကျထားလိုကျတယျ။ တပညျ့တျော ဂပြနျကို သှားရတော့မှာဖွဈလို့ သကျသတျလှတျတော့ စားဖွဈမှာ မဟုတျတော့ဘူးဘုရား။
ဟို မှာ အဆငျပွပေါ့မလားလို့ စိတျထဲကပဲ လြှောကျတာကို ဆရာတျောက လူထုပရိသတျကို တရားဟောရငျးကနေ သူမြားနိုငျငံမှာလညျး သကျသတျလှတျစားရငျဖွဈတာပါပဲ။ အာလူးကကျသလိပျကွျောတို့၊ ကွကျသှနျကွျောတို့ရှိတာပဲ။ ဘယျမှာနနေကေောငျးအောငျ နရေငျကောငျးမှာပဲလို့ တရားထဲထညျ့ဟောတာ ကွကျသီးတောငျထတယျ။ ဒါပမေဲ့ သွျော . . . တိုကျဆိုငျတာပဲ ဖွဈမှာပါလို့ပဲ တှေးလိုကျတာ ဂပြနျကို တကယျရောကျတော့ ဆရာတျောမိနျ့ တဲ့အတိုငျး အာလူးကတျသလိပျကွျောနဲ့ ကွကျသှနျကွျော တကယျရှိလို့ အံ့သွသှားတာ”ဟု သူ၏ အတှအေ့ကွုံအားပွောပွသညျ။
သူ သာမည၌ ရဟနျးဝတျခါစတှငျလညျး မညျကဲ့သို့ နထေိုငျရမညျ့အကွောငျးအား ဆရာတျောကို လြှောကျထားရာ ဆရာတျောမှ ”ဒီတောငျတဝိုကျမှာ ရဟနျး သံဃာတှေ အမြားကွီးလိုကျကွညျ့ပေါ့။ အဲဒီအထဲက ကောငျးတာကိုယူပေါ့။ မကောငျးတာ မယူနဲ့”ဟုသာ မိနျ့ကွားခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။ လကျရှိအခြိနျ ၎င်းငျးအနနှေငျ့သာမညဆရာတျောဘုရားကွီး မရှိတော့သျောလညျး အလုပျအကိုငျသဈ တိုးခြဲ့မှုပွုလုပျတိုငျး သာမညတောငျသို့ လာရောကျ အောကျမွနေငျး၍သာ အလုပျအကိုငျသဈကို တိုးခြဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။
ယငျး ၁၉၈၀ ခုနှဈကြျော သာမညဆရာတျော ဘုရားကွီးဂုဏျသတငျးကြျောဇောမှုကွောငျ့ ပွညျတှငျး ခရီးသှားကုမ်ပဏီမြားမှ သာမည ခရီးစဉျအဖွဈ အထငျ ကရ ထညျ့သှငျးလာခဲ့ရသညျ။ မွနျမာနိုငျငံ၏ အနယျ နယျအရပျရပျမှ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအပေါငျးတို့သညျလညျး သာမညတောငျသို့ မဖွဈမနသှေားရောကျကာ ဆရာတျောကို ဖူးမွျောသဖွငျ့ သာမညတောငျသညျ ရာသီမရှေး အထူးပငျစညျကားခဲ့သောနရော ဖွဈခဲ့သညျ။ သာမညဆရာတျောဘုရားကွီးအား လာရောကျကွညျ ညိုဖူးမွျောသူမြားထဲတှငျ မွနျမာပွညျသူမြား အပါအဝငျ ထိုငျးနိုငျငံသူနိုငျငံသား အမြားအပွားပါလာရောကျ ဖူးမွျောကွသညျအထိ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့သညျ။ ဆရာတျောဘုရားကွီးမှလညျး သာမညသို့ လာရောကျ သူ လူထုမငျးပရိသတျအား သကျသတျလှတျထမငျး ဟငျးဖွငျ့ ဧညျ့ခံကြှေးမှေးရာတရကျလြှငျ ဆနျတငျး ပေါငျးရာနှငျ့ခြီ၍ ခကျြပွုတျကြှေးမှေးရသညျဟု ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။
“ကပျြသိနျး ၅၀၀၀ ကို တောငျးဖွငျ့ လာလှူသူ”
ဆရာေ တျာဘုရား သကျတျောထငျရှားရှိစဉျက လူမှုအကြိုးပွုလုပျငနျးမြားဖွဈသညျ့ အိုးအိမျမဲ့မြားအား ကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျခွငျး၊ စာသငျကြောငျးမြား ဆောကျလုပျလှူဒါနျးခွငျး၊ လမျးမြားပွုပွငျခွငျးတို့ကို အထူးအရေးပေးလုပျဆောငျခဲ့သညျဟု ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။ ”လမျးခငျးတဲ့ ကတ်တရာတှေ ကုနျသှားပွီဆိုပွီး ဆရာတျောဆီကို သှားလြှောကျတော့ ဆရာတျောက ဖုနျးဆကျတယျ၊ မနကျလညျးရောကျရော ရှမျးအမြိုးသမီးတယောကျက သိနျးငါးထောငျတောငျးတှနေဲ့ ထညျ့ပွီးလာလှူတယျ။ စဉျးစားလို့မရတာက အဲဒီအခြိနျ ဘဏျစနဈတှလေညျး မကောငျးဘူး၊ သာမနျအမြိုး သမီးတယောကျပုံစံက သိနျးငါးထောငျကို တညတညျးနဲ့ လာလှူတာဆိုတော့ တျောတျောအံ့သွသှားတာ ခု ခတျေ သူဌေးတောငျ ငှသေိနျးငါးထောငျလိုရငျခကျြ ခငျြးအဆငျသငျ့ရှိပါ့မလား။ ဘဏျထုတျရမှာနဲ့ ဘာနဲ့လေ။ အဲဒီငှေ လာလှူလညျးပွီးရော ထိုငျးဘကျကို ကတ်တရာပုံးတှေ လှမျးမှာပွီး လမျးတှခေငျးတာ” ဟု ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။
ဆရာေ တျာ၏ သီလဂုဏျ၊ ပညာဂုဏျ၊ ခမာ၊ ဇာဂရိယ စသော ဂုဏျမြားနှငျ့ သာသနာရေး အားပေးဆောငျရှကျတျောမူခွငျးမြားကို လေးစားလကျြနိုငျငံတျောအစိုးရက ၁၉၉၁၊ နိုဝငျဘာ ၂၁ တှငျ အဘိဓဇ အဂ်ဂမဟာ သဒ်ဓမ်မဇောတိကဘှဲ့တံဆိပျတျောကို ဆပျကပျလှူဒါနျးခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ သာသနာတျောအကြိုးအား သယျပိုးထမျးဆောငျတျော မူရငျး သကျတျော ၉၃ နှဈ၊ သိက်ခာတျော ၇၃ ဝါအရ ၁၃၆၅ ခု၊ နတျတျောလဆနျး ၆ ရကျ၊ ၂၉-၁၁-၂၀၀၃ စနနေေ့ နံနကျ ၉ နာရီတှငျ ဘဝနတျထံ ပြံလှနျတျောမူခဲ့သညျ။
ဆရာေ တျာသညျ ၂၉-၁၁-၂၀၀၃ တှငျ ဘဝ နတျထံပြံလှနျတျောမူခဲ့သဖွငျ့ လကျရှိ ၂၉-၁၁-၂၀၁၆ တှငျ ဘဝနတျထံ ပြံလှနျတျောမူခဲ့သညျမှာ ၁၃ နှဈတငျးတငျးပွညျ့ခဲ့ပွီဖွဈသညျ။ ယငျးကဲ့သို့ ၁၃ နှဈ ကွာမွငျ့ခဲ့သျောလညျး ဆရာတျောဘုရား ပြံလှနျတျောမူပွီးစအခြိနျ ဆရာတျော၏ရုပျကလာပျတျော ရှိစဉျက သာမညတောငျသို့ ဘုရားဖူးလာရောကျသူ အမြားအပွားရှိသေးသညျဟု လကျရှိ သီတငျးသုံးနသေော ဦးပဉ်စငျးတပါးက မိနျ့သညျ။ ”ဆရာတျောရှိတုနျးက ရဟနျး၊ သာမဏေ၊ သီလရှငျ၊ ယောဂီ ငါးရာ လောကျ သီတငျးသုံးကွပမေယျ့ အခုဆို စုစုပေါငျးအပါး သုံးဆယျလောကျပဲရှိတယျ။ အခွားပွောငျးပွီး သီတငျးသုံးသူရှိသလို လူထှကျတဲ့ သူတှလေညျး ထှကျကုနျကွပွီ။ ကိုရငျဆိုရငျ အခုတပါးပဲရှိတော့တယျ” ဟု မိနျ့ သညျ။
သာမညဆရာတျောဘုရားကွီး ပြံတျောမူပွီး ရုပျကလာပျတျောရှိစဉျက မွနျမာပွညျဘုရားဖူးခရီးစဉျမြား တှငျ သာမညဘုရားဖူးခရီးစဉျအဖွဈ ရှိနသေေးသျောလညျး ရုပျကလာပျတျော ခိုးယူခံရပွီးနောကျပိုငျးတှငျ ဘုရားဖူးခရီးစဉျအဖွဈ တဖွညျးဖွညျးကှယျပြောကျလာခဲ့သညျ့အပွငျ ရဟနျး၊ သာမဏေ၊ သီလရှငျ ယောဂီမြားလညျး လြော့ပါးလာခဲ့သညျဟု မိနျ့သညျ။ ဆရာ တျောဘုရားကွီးရှိစဉျက လူထုဧညျ့ပရိသတျအတှကျ သကျသတျလှတျထမငျးဟငျးကြှေးရာ ဆနျတငျးပေါငျး တရာကြျောနစေ့ဉျခကျြပွုတျခဲ့ရပွီး လကျရှိအခြိနျတှငျ ဆနျ ၃ တငျးခနျ့သာ ခကျြပွုတျရပွီး ဘုရားဖူးလာရောကျသူမြားအား သကျသတျလှတျထမငျးဟငျး ကြှေး မှေးနဆေဲပဲဖွဈသညျဟု မိနျ့သညျ။
သာမည ဆရာတျောဘုရားကွီး ဘဝနတျထံပြံလှနျတျောမူပွီး၁၃ နှဈ ပွညျ့ခြိနျတှငျ သာမညတောငျသို့ ပွညျတှငျးခရီးသှားလုပျငနျးမြား မရှိတော့သကဲ့သို့ သာမညတောငျတှငျ သီတငျးသုံးသညျ့ ရဟနျးသာမဏေ သီလရှငျယောဂီမြားလညျး နညျးပါးသှားခဲ့သညျ။ သို့သျောလညျး ဆရာတျော၏ ဘုနျးတနျခိုးအာနုဘျောနှငျ့ သာမညတောငျ၏ အရိပျအာဝါသကွောငျ့ သာမညမွို့ကလေးသညျ နှဈ ၃၀ ခနျ့အတှငျး အခွခေနြထေိုငျသူမြားဖွငျ့ စညျကားနသေညျကို တှမွေ့ငျနရေသညျ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ တိတ်တဆိတ်ရောက်ရှိနေသော အသံတိတ်လူသတ်သမား
(၇) ရက် သား သမီး များအ တွက် တစ် ပတ် အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သော သင့် ကံကြမ္မာ (၃၀.၁.၂၀၂၀ မှ ၅.၂.၂၀၂၀ အထိ)
ဖေဖော်ဝါ ရီလအတွက် တန င်္ဂနွေသားသမီးများ၏ ကံကြမ္မာနှင့်ပတ်သက်သော ဟောစာတန်း